War Saxafadeed Beesha Samaroon (Gadabuursi) ee Kanada
Jahliyadda Samaroon ee Kanada
Waxaa lagaal xiriiri karaa:
Mudane CAli Qayad (Toronto)
Toronto, 16 janaayo 2005
Ka dib wararka la halmaala saami qaybsiga kuraasta Baarlamaka ee Soomaliland, waxaan halkan ku xusaynaa war murtiyeed ay soo saareen Jahliyada Samaroon ee dagan Dalka Kanada.
Warka ku saabsan saami-qaybsiga kuraasta Baarlamanka waxaan ka xunahay in aan halkan ka sheegno sida aan uga xunahay qaybta loo qoondeeyay gobolka Awdal oo ay ku noolyihiin laba qoomiyadood oo ka mid afarta ku Nool Soomaliland. Waxaan ka xunahay oon marna la qaadan karin tirada afka lagu dhuftay ee Baarlamanku ka doodayo.
Waxaan si cad uga soo horjednaa habka loo qabshay kuraasta oo qabiilka Isaaqu sad bursi uuna u qalmin la dul saaray. Waxaan cadaynaynaa in arintani tahay jabkii ugu horeeyay ee la soo gudboonaada Soomaaliland wakhti aan loo baaahnay. Waxaan u aragnaa khalad cad oo siyaasadeed oon geedna loogu soo gaban in Isaaq isku kala qaybsho dhowr iyo tobankiisii jilib halka qabiilooyaka la siman ee Awdal loola dhaqmay si jilib-hoosaad Isaaq ay yihiin. Waxaan marnaba la dul qaadan karin dhacdadan oo u eeg mid ay ka soo shaqeeyeen dad aan dan ka lahayn midnimada Soomaaliland iyo jiritaankeega.
Waxaan ugu baaqanaa mudanaasha baarlammanka ee Awdal ka soo jeedaa inay si degdega wax uuga qabtaan arintan oy mowquf adag iska taagaan iyagoo turjumaya dareenka dadweynaha reer Awdal oo arintan ka midaysan. Ma matali karaan mustaqbalka Awdal afar nin oo golaha wasiirada ka tirsan iyo Daahir Rayaale oo cadaystay inuu abaal celinaayo isaga u gaar ah.
Yeeli mayno cad qudhsiga sidan ah waxaanan ku talaabsanaynaa siduu arinkani u fashilmi lahaa. Noqon mayno oo markhaati ka noqonmayno taariikhda xaaraanta ah ee la rabo in Hargaysa noo qorto. Arintan haddii si deg deg ah wax looga qaba waayo waxaa cad in isku xidhnaantii iyo wada shaqayntii Awdal iyo inta kale halkaa ku dhamaan doonto.
Waxaan Mudanayaasha reer Awdal ee Hargaysa jooga ugu baaqaynaa in aan hiil iyo hooba la garab joogno sidii ay arintan wax uuga qaban lahaayeen. Waxaanan ku waaninaynaa inay sidii Mudane Xuseen Ceelaabe is casilaan si ay u muujiyaan halka arinta ay ka taagan yihiin. Arinta Xuseen Ceelabe iska casilay waxaa ka daran oo ka aayo xun tan Hargaysa laga wado oon sinaba loogu dul qaadan karin.
Dhibaatooyinka siyaasadeed ee arintan ka dhasha waxaa masuuliyadeeda iska le intii ku talisay iyo intii ku raacday taladan quudhsiga adinka ku haysa.
Awdal wax badan iyay tanaasulaad samaysay, laakiin tani waa kama dambayn waana mid lagu kala tagi doono haddii si deg deg ah wax looga qaban waayo. Marka Cadaalad halkaa layska taago ma aragno waxa soo socda ee loogu xisho Soomaaliland waayo Awdal waa gobol isku filan�